«L’amour est une chose merveilleuse, miraculeuse, mais qui a ceci de commun avec le feu : il faut l’entretenir et l’alimenter » Jean Simard
Misy karazan’olona mora entim-po, izay mihitsy no toetrany ka rehefa misy fihetseham-po tsapany dia iny no manosika ny sainy handray fanapahan-kevitra haingana mifandraika amin’izay avy hatrany.
« Celui qui se relève est plus fort que celui qui n’est jamais tombé »
Isan’ny tsy maintsy lalovana amin’ny fiainana ny sedra, hatramin’ny fahakelin’ny olona ka mandra-pahalehibeny. Ireo sedra ireo, izay mafy matetika ka miantraika amin’ny toe-tsaina sy toe-pon’ny idonany matetika.
« Les opportunités c’est comme les autobus, il y en a toujours une autre qui arrive »
Na dia betsaka aza ireo miferon’aina, latsa-dranomaso noho ny hamafin’ny fiainana dia izay anefa no anjara asany : misangy antsika, mitondra hafaliana ary mitondra sedra ihany koa indraindray.
Renoncez un temps à vos opinions, à vos jugements afin de le comprendre. Bien des conflits peuvent ainsi être évités » Dalai Lama
«Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer.» Peter Drucker
Samy mba manana ny vinavinany amin’ny hoavy ny tsirairay. Na eo amin’ny lafiny ara-bola, ara-boninahitra, arak’asa, ara-pifandraisana, sns satria mba samy te hanana fiainana milamina, ao anaty fahampiana sy fiadanana
Oprah Winfrey Tandremo izay inoanao, hoy ireo mpandinika maha-olona fa ho tanteraka aminao izany. Herinandro vaovao indray no atrehina manomboka anio.
On pense souvent que la mode est superficielle mais la mode est dure, ça fait mal et c'est un très beau métierR34; (R06;Laurent Mouret)
Raha vao miresaka lamaody, dia heverina fa haitraitram-behivavy izany. Tsy ny vehivavy rehetra koa, fa ireo izay sokajiana ho tsy dia manan-tsaina firy, tia rendrarendra
Marobe ireo hafatra miafina voarainay ao amin’ny pejy facebook-n’ny «Jejoo, le quotidien des femmes » isan’andro. Hafatra mangataka torohevitra sy fanazavana mahakasika ny fitiavana amin’ny ankapobeny.
Tsikaritra amin’ireny hafatra marobe voaray ireny fa tsy vitsy, na ny lehilahy, na ny vehivavy no lasa manao tandrevaka izany fitiavana izany rehefa tafiditra ao anaty tokantrano. Ny lehilahy repotry ny asa famelomana ny ankohonana ka tsy mahatandrina intsony ny fitondran-tenany ary lasa manova ireo fahazarana nahafinaritra mialohan’ny nanambadiana. Ny vehivavy kosa etsy andaniny, variana amin’ny fitaizana sy ny fikoloana ny tokantrano ka rera-dava tsy manam-potoana ho an-dramose akory ka na ny vatany nahafatifaty teo aloha aza tsy dia voakolony intsony. Io fitiavana io anefa dia tahaka ny afo ihany, mila kolokoloina, mila karakaraina mba tsy ho faty satria izy no mamelon’aina ny ankohonana. Ilaina noho izany ny manokana fotoana isan’andro ho azy na dia fotoana fohy monja aza. Ny maraina rehefa mifoha dia orohana izy, fihinina. Andefaso someso kely iray na roa isan’andro izy, mirary azy tontolo andro mahafinaritra na mirary azy hazoto homana. Ny hariva kosa, rehefa vita ny fikarakarana rehetra ao an-trano, izay iaraha-mifandrimbona, dia miaraha mba mijery horonantsarimihetsika ohatra, sady mifampitantara ny tontolo andro ary miara-mamonjy ny fandriana avy eo. Rehefa voakolo tahaka izany izy dia handrobona, tahaka ny voninkazo, ka sady haharitra no hahafinaritra jerena !